Wariye dhaawac ah oo deeq lacageed la gaarsiiyay-Sawirro – Radio Muqdisho
Wariye dhaawac ah oo deeq lacageed la gaarsiiyay-Sawirro
Deeqdan Lacageed oo ay soo dhiibtay hey’ada CPJ oo u dooda xaquuqda saxafiyiinta ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay wariye Mucaawiye Axmed Muudeey oo dhowaan kooxo hubeysan key dhaawaceen deegaanka Lumbar 50 ee gobolka Shabeela Hoose, waxaana lacagtan ay tiro ahaan gaaraysay $1800.
Dr Cabdi Fiqi Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Isbitaalka Daarul Shifa oo dhaawaca wariyaha lagu dabiibaayo ayaa ka warbixiyay xaalada caafimaad ee wariyaha isagoo tilmaamay in dhakhaatiirta ay ku guuleysteen qaliin ay ku sameeyeen wariyaha.
Agaasimaha Idaacada Dalsan Xasan Cali Geesey ahna gudoomiyaha ururka midowga xarumaha warbaahinta ee SIMHA oo ku wareejiyay deeqdasi lacageed wariye Mucaawiye Axmed Muudey ayaa sheegay in hey’adda CPJ ay la xiriireen isla markaana ay ka ogolaatay in ay caawiso wariyahan isagoo ugu mahadceliyay sida ay codsigooda ugu soo jawaabeen.
Wariye Mucaawiye Axmed Muudey oo la wareegay deeqdaasi lacageed ayaa ka mahadceliyay deeqda la soo gaarsiiyay isagoo sidoo kalena u mahadceliyay dhakhaatiirta iyo dhamaan hawlwadeenada caafimaadka ee Isbitaalka Daarul Shifa iyo hey’ada deeqda soo gaarsiisay.
Sawiro Qaade: Muuse Cismaan Abtow
Fly Dubai oo duullimaadyo ka bilowday Soomaaliya
Kulan looga doodayay sharciga iibka qaranka oo la soo gebagebeeyay-Sawirro